Maitiro ekugadzira inokwezva PowerPoint | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 26/04/2021 19:16 | Misangano, Resources
Kana iwe uchifanira kugadzira mharidzo yePowerPoint uye iwe usingade kuti vateereri vavate kana kuti vanofinhwa, saka unofanirwa kufunga nezvekuti ungagadzire sei PowerPoint inokatyamadza iyo, mukuwedzera pakuve neyemukati mehunhu, iyo inoonekwa inonakidza uye inofadza. vatariri vako. Zvingave zveveruzhinji kana zvevadzidzi, Zvirinani kuti iwe uzive maitirwo azvo uye kuti hapana munhu anoteerera kune kwako kuedza uye ruzivo.
Mharidzo chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya mune dzedzidzo nemabhizinesi epasirese kupa misangano kana mapurojekiti matsva. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuburitsa zvinoonekwa mune chero yakasarudzika kana dzidzo nharaunda.
Tevere, isu ticha tsanangura maitiro ekuvaita kuti vawedzere kukwezva uye nenzira iyi kubata ruzhinji kutarisisa kubva panguva yekutanga.
1 Zvemukati zvakarairwa zvakanaka
2 Zvishoma pane
3 Mimwe mifananidzo
4 Usashandise zvisizvo vignettes
5 Multimedia zvemukati: chishandiso chakanaka
6 Zvemagariro midhiya zvakare
7 Wedzera makotesheni
8 Bata nevateereri vako
Zvemukati zvakarairwa zvakanaka
Chaotic zvemukati zvichaita kuti vateereri vako vanzwe kushushikana, kuitira kuti vanzwisise zvinhu zvirinani zvakakosha kuti iwe uraire zvirimo. Ehe, iwe unofanirwa kufungisisa kuti iine sumo, zvinonakidza zvemukati uye mhedziso. Zvayo, Izvo zvakakosha kuti iwe ushande pane chinyorwa kuti uzviite usati watanga kuzviita.
Pakutanga, nemusoro wePowerPoint unofanirwa kuti unyatso shandwa, nekuti iriside rinenge riripo kwenguva yakareba, vateereri vachigara pasi uye iwe wakagadzirira kutanga. Naizvozvo, inofanira kuchengetwa uye kunyatsofungidzirwa. Iwe uchafanirwa kuratidza zita riri kuita uye rinojekesa zvauchazotaura nezvazvo. Chinangwa ndechekukwezva kutariswa neruzhinji kuitira kuti vafarire kubva pakutanga.
Kunyangwe mune yako script yekutsanangura isa zvimwe zvinhu, muPowerPoint iwe zvirinani uteedzere mutemo wekuti zvishoma zvakawandisa. Rangarira kuti ruzivo urwo uchazotsanangurira vateereri vako runofanira kuve nyore nekuti nenzira iyoyo, pfungwa dzevateereri vako hadzizotanga kudzungaira. Masiraidhi izere asi haafanire kutora pfungwa dzese, kutaura kwako pachena kunokoshawo.
Usambofa wakaisa zvinopfuura zvina pfungwa kana mifananidzo mumufananidzo. Kana zvisiri, zvingave zvakawandisa kune vanoona uye ipapo havazorangarira zvawakaisa pavari. Zvishoma zviripo uye kana iwe uchida kuti vazive chaizvo zvaunazvo mumasiraidhi izvi zvakakosha kuti urangarire.
Zvemukati zvinogara zvichinyatsoita zvirinani asi zvinogara zvichibvisa zvechipiri kana zvisingabvumirwe pfungwa zvinongoshanda sekuzadza uye izvo zvisingazorambe zviri mundangariro-pfupi-yevatarisiri vako.
Uye zvakare, kuti mharidzo yako ive nekubatana kwakanaka zvakakosha kuti usasanganise misoro pane imwechete slidei. Zvirinani kuti mune yega yega munotaura nezvenyaya dzakasiyana kana kushandisa akawanda masiraidhi eiyoyo musoro wenyaya kana akareba. Asi hapana kana mamiriro ezvinhu iwe unotora iwo iwo iwo slide kuti utaure pamusoro penyaya inopfuura imwechete. Izvi zvinongoita kuti vateereri vako varasikirwe nechero zvese zvauri kutsanangura.
Rangarira kuti iwo masiraidhi chinhu chinoonekwa chekubatsira kune zvese zvaunazvo zvekuratidzira kune vanoona. UyeIzvi zvinoreva kuti haufanire kuisa zvese zvaunoda kutaura pamasiraidhi. Uye haufanire kana kuverenga iwo masiraidhi anoratidza kusagadzikana kana kuti haurangarire ruzivo rwaunoda kuburitsa. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe uedzere kuratidzira kana iwe usina ruzivo rwakanyanya mukuzviita.
Funga kuti zvakare, vanhu varipo havagone kuverenga izvo iwe zvawakaisa pamasiraidhi uye panguva imwechete vanonzwa zvese zvauri kutaura. Izvo zvakanaka chimiro chinotevera:
Usashandise zvisizvo vignettes
Kunyangwe dzimwe nguva zvichiratidzika kunge zviwanikwa zvakanaka, muchokwadi ivo vari, asi chete kana iwe ukavashandisa nenzira yekongiri uye pane akati wandei. Usashandise chishandiso ichi nekuti zvinofinha Uye kana ukaratidza ruzivo rwakawanda, vateereri vako havazozvirangarira uye vachatanga kuratidza kusafarira pane zvauri kutsanangura.
Multimedia zvemukati: chishandiso chakanaka
Multimedia zvemukati chinhu chakakosha chishandiso chausingakwanise kupotsa. Saka, unogona kusimbisa mharidzo yako nemavhidhiyo, mifananidzo inofamba, nezvimwe. Paunenge uchishandisa sosi iyi, zvakakosha kuti iwe utarise nezve creativity, kwete kuba zvemukati kubva kune vamwe vanyori uye uve wepakutanga sezvinobvira.
Zvemagariro midhiya zvakare
Pazvinenge zvichidiwa uye pese pazvinenge zvichidiwa nemamiriro ezvinhu, usakanganwa kuisa pasocial network zvebasa rako kuitira kuti vamwe vakuzive uye vagokupa kuti utevere. Iyi inzira yakakosha yekusvika kuvanhu vazhinji Uye kuti vatariri vako vagone kugovana chimiro chako nevavanoziva kana hama kana vakafarira zvawakaratidza.
Kuwedzera makotesheni kuhurukuro izano rakanaka nekuti izvi zvinowedzerawo kufarira kwevaoni vako. Ivo vanofanirwa kuve makotesheni kubva kune vane mukurumbira vanhu asi vane chekuita nezvirimo iwe zvauri kutsanangurira kune vateereri vako, ndiko kuti, zvine hukama. Chii chimwe, Izvi zvichaita kuti zvauri kutaura zvive zvakavimbika uye kuvaka kuvimba.
Ehe, usazadzise iwo maratidziro eakagadzwa. Izvi zvinoreva kuti haufanire kuvashungurudza, nekuti zvikasadaro zvinoita sekunge iwe hauna maitiro ako uye kuti zvese zvauri kutsanangura hazvina chekutanga asi zvakavakirwa pane vamwe vanhu.
Bata nevateereri vako
Kana iwe uchida kusvika kune vateereri vako, zvakakosha kuti iwe usangane navo. Iyo yakanaka nzira yekuti varambe vari munzira uye vachengete kufarira kwavo mune zvese zvauri kutaura. Ivo vanogona kutsvaga nguva mumusangano kukwanisa kudyidzana neveruzhinji nenzira yakavhurika. Ivo vachanzwa chikamu chemusangano uye izvi mukuwedzera pakuvaita kuti vanzwe zvirinani, ivo vanozopinza mukati zvese zvese zvauri kutumira kwavari.
Iwe unogona zvakare kuwedzera mibvunzo, mapolls kana mitambo ine chekuita nezvese zvauri kutsanangura. Nekudaro, pakati pevateereri pachavewo neyakajeka kwazvo nharaunda yekubatana iyo ichavaita kuti vanzwe kufara newe uye nezvose zvauri kugadzira.
Nemazano aya iwe uchaona kuti yako PowerPoint ichave inokwezva zvakanyanya uye kuti vateereri vako vachada kukuteerera, vachitarisa pabasa rako uye ivo havazorasa chero chinhu chauri kuvatsanangurira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Maitiro ekugadzira inokwezva PowerPoint
5 makiyi ekuvandudza yako pabonde uye uve anofara